Amathiphu wokugcina i-smartphone yakho njengosuku lokuqala | Izindaba zamagajethi
Amathiphu ama-5 wokugcina i-smartphone yakho njengosuku lokuqala
Sonke singathanda I-smartphone yethu iqinile futhi isebenza njengosuku lokuqala esiyithenge ngayo noma basinike yona. Ngeshwa lokhu akujwayele ukwenzeka kakhulu futhi ukuthi cishe sonke siye sashelela ngesikhathi esithile ezandleni zethu, sawela phansi futhi sashaya kahle ikesi lensimbi. Futhi akulula ukuthi ukuphela kwethu kusebenze njengosuku lokuqala noma kube nokusebenza okufana ncamashi.
Siyazi ukuthi ngeke kube yinto elula ukugcina umakhalekhukhwini wethu unjengosuku lokuqala, kepha namhlanje sizokunikeza uchungechunge lwezeluleko ezithakazelisayo zokukufeza. Vele, akekho osicela ama-akhawunti ezinyangeni ezimbalwa, uma ngemuva kokulandela lezi zeluleko ungakwazanga ukugcina iselula yakho ifana nosuku lokuqala.
Futhi kungakhathalekile ukuthi sizilandela kangakanani lezi zeluleko, ukuze idivayisi yethu iqhubeke futhi isebenze njengosuku lokuqala, kuzodingeka silandele lezi zeluleko, sibe nenhlanhla encane futhi sithandazele nokuthi isinikeze imiphumela emihle futhi hlala "ufile" eminyakeni engaphezudlwana kwemibili, into ngeshwa evame ukuba yinto ejwayelekile.
1 Beka ikhava kusikhungo sakho sokugcina futhi ungafaki izindleko
2 Vala ifoni yakho uma ungayidingi
3 Nakekela ibhethri ngangokunokwenzeka
4 Kuyinto i-smartphone hhayi i-console yomdlalo
5 Nikeza i-smartphone yakho impilo yesibili
Beka ikhava kusikhungo sakho sokugcina futhi ungafaki izindleko
Ngaphandle, enye yezindlela zokugcina i-smartphone yakho njengosuku lokuqala ukubeka ikhava nengilazi emnene, esivumela ukuthi siyigcine iphelele, noma okungenani izame, lapho iwela phansi noma ishayiswa yinoma yini.
Njengenjwayelo Isincomo sethu ukuthi uthenge ikesi elihle nengilazi enhle emnene, engakhokhi mali. Uma uthenge umakhalekhukhwini ngamakhulu ama-euro, senzele futhi uzenzele umusa wokuthi ngeke ulithenge leli cala kunoma yisiphi isitolo lapho kukubiza khona ama-euro ambalwa.
Vala ifoni yakho uma ungayidingi
Iningi lethu eline-smartphone, uma kungeyona yonke, alilokothi liyicime, ngisho nasebusuku lapho silele, lapho kucace bha ukuthi ngeke silisebenzise noma silidinge. Lokhu kusenza sibeke ezinye izinto zedivayisi yethu ephathekayo, njengeprosesa noma amamojula wememori, ekusebenzeni njalo.
Yize kuyiqiniso ukuthi laba abanekhono baklanyelwe ngokukhethekile ukungabi nokuphumula okukodwa, kubalulekile ukubanikeza ukuphumula kanye nekhefu. Ngalokhu, sizokufeza futhi lokho, ngokwesibonelo, iprosesa lethu alinawo amandla okuguga futhi landisa impilo yalo elisebenzisekayo.
Uma uyolala noma nganoma isiphi isikhathi lapho ungadingi noma ungasebenzisi idivayisi yakho ephathekayo, yicishe futhi uzokwazi ukugcina i-smartphone yakho isikhathi eside.
Nakekela ibhethri ngangokunokwenzeka
La impilo yebhethri Ngenye yezinkinga ezinkulu ukuthi kungani iningi lethu linquma ukushintsha ama-smartphones. Ngokuhamba kwesikhathi, kuqala ukuguga futhi kusinikeze ukuzimela okuncane nokuncane, yingakho kubalulekile ukuthola idivayisi entsha. Ibhethri lingakugcina ukusebenza kwalo uma silinakekela kakhulu kusukela ngomzuzu wokuqala lingena ezandleni zethu.
Kule blog efanayo sesivele sikunikeze izikhathi ezimbalwa amathiphu amahle okusindisa ibhethri, kepha uma ufuna ukuthi ihlale isesimweni esihle iminyaka eminingana, hlonipha imijikelezo yokushaja, sebenzisa njalo ishaja yangempela bese uzama ukugcina ukushisa kuzinzile ngaphandle kokwehluka okukhulu okungayilimaza.
Uma ukwazi ukugcina ibhethri ledivayisi yakho ephathekayo lisesimweni esihle, kungenzeka kakhulu ukuthi i-terminal yakho izoqhubeka ifane nosuku lokuqala futhi ikunikeze ukusebenza okuhle ngaphandle kwenkinga.
Kuyinto i-smartphone hhayi i-console yomdlalo
I-Google Play, i-App Store nezinye izitolo eziningi zohlelo lokusebenza zamadivayisi weselula zigcwele imidlalo, isikhathi ngasinye sekhwalithi ephezulu futhi efana kakhulu neyekhonsoli yevidiyo. Kodwa-ke, akumele sikhohlwe ukuthi i-smartphone yethu akuyona i-console yomdlalo.
Kunabantu abaningi abasebenzisa ukuphela kwabo cishe kuphela ukudlala, ukhohlwe ukuthi umsebenzi wedivayisi ungokunye. Akukho neyodwa kuma-Smartphones amaningi atholakala emakethe angasetshenziswa ukudlala imidlalo, noma ngabe inamandla kangakanani.
Ukudlala amahora nge-smartphone yethu kuzosiza kuphela ekwenzeni kushise kakhulu futhi kuhlupheke. Ukuzinikela kwakho ekudlaleni kwenza iprosesa ukuthi isebenze ngokugcwele isikhathi eside, ngakho-ke kungekudala noma kamuva lokhu kuzokwenza ukuthi iselula yethu ilahlekelwe yizimfanelo zayo nempilo yayo ewusizo inciphiswe kakhulu.
Uma ufuna ukuthi i-smartphone yakho, entsha noma endala, ihlale njengosuku lokuqala, jabulela umdlalo ongajwayelekile ngendlela elinganiselayo futhi ngaphandle kokuyisebenzisa kabi.
Nikeza i-smartphone yakho impilo yesibili
Uma unedivayisi ephathekayo ene-Android operating system, indlela enhle yokunikeza i-terminal yakho impilo yesibili ukufaka i-ROM, ukuthi ungakhetha ngokuthanda kwakho futhi lokho kuzokunikeza izinketho ezingapheli nemisebenzi emisha. Ukufaka le software entsha kuvame ukuba lula, yize kuzodingeka ukuthi ngaphambi kokuqalisa i-adventure yokuyifaka uthole ukuthi ungayenza kanjani hleze ushiye i-terminal yakho njenge-paperweight yesimanje.
ICyanogenMod ingenye yamaROM aziwa kakhulu futhi iyatholakala kumadivayisi amaningi we-Android, kepha kuningi onakho, ngakho-ke cabanga ngalokho okufunayo nokuthi ufunani bese uya ekuzideleni kokunikeza i-smartphone yakho impilo yesibili ukusishiya ngemuva. Njengosuku lokuqala.
Ukugcina i-smartphone yethu njengoba bekuwusuku lokuqala kuwumsebenzi onzima, uma kungenzeki, kepha ukuyibeka ezingeni eliseduze nokuthi sikuthole kanjani akuyona into eyinkimbinkimbi. Ukwenza lokhu, kuvela ukuthi silandele iseluleko esikukhombise sona kule ndatshana kulencwadi futhi sithandazela nenhlanhla yokuba nathi.
Futhi kungakhathalekile ukuthi sinakekela kangakanani ifoni yethu, uma singenayo ingcosana yenhlanhla ukuze indodana yethu ingacwilisi iselula yethu noma iyiphonse emoyeni, ngeke sithole lutho.
Yiziphi izeluleko ozisebenzisayo ukwenza i-smartphone yakho ihlale njengosuku lokuqala?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Amathiphu ama-5 wokugcina i-smartphone yakho njengosuku lokuqala
Noma uma ungakwazi ukuthola iWindows Phone ukuze isoftware yakho isebenze kahle (lagdroid) futhi ibengcono uma iyi-Lumia enje, akudingekile ukuthenga ikesi (ama-euro angama-700 wezinto eziphambili ze-premium njengekani lesoda )
Noma okungcono okwamanje. Thola ukuphela kwe-Apple labo abakwaziyo ukusebenza kahle sengathi bekuwusuku lokuqala
Izintshisekelo eziyi-10 mayelana nama-Oscars ongazi
Izinhlelo zokusebenza ezingu-7 zokufunda isiNgisi ngaphandle kwezinkinga